CircuPress: Eto ihany ny mailaka ho an'ny WordPress! | Martech Zone
CircuPress: Eto ihany ny mailaka ho an'ny WordPress!
Alatsinainy, Novambra 11, 2013 Talata, Jona 17, 2014 Douglas Karr
Telo taona lasa izay, izaho sy i Adam Small dia nipetraka tao amin'ny magazay kafe ankafizinay ary nilaza izy fa sarotra ny mampiditra serivisy serivisy amin'ny mailaka. Niasa tao amin'ny ExactTarget aho ho mpanolotsaina fampidirana ka fantatro tsara ireo fanamby. Adama sy ny vadiny dia niorina Agent saosy, sehatra marketing ara-barotra efa nitombo ary nandefa mailaka an'aliny isan-kerinandro. Ny olana dia ireo mpanome tolotra mailaka (ESPs) dia toa nanangana ny fampidiran'izy ireo amin'ny fangatahana na ho fiheverana ny mpampiasa azy.
Nanomboka nandavaka sy nanao fikarohana izahay ary nahita fa misy mpamatsy mailaka marobe ao, na i Amazon aza dia nanomboka iray, fa ny vidiny sy ny fahasarotana dia tsy mendrika azy fotsiny. Satria lasa laharam-pahamehan'ny mpampiasa an'i Adam ny marketing amin'ny mailaka dia nanjary niantehitra bebe kokoa izy, nandany bebe kokoa ary nanjary kivy. Ka nanapa-kevitra ny hanangana ny azy manokana izy! Herintaona taty aoriana, nandefa ny MTA (Mail Transfer Agent) azy ny sehatra Adam. Adam dia nanangana ny fitantanan-tsorony manokana ary tsindrio ny fanarahana azy io koa! Ary ny fahafahany mamonjy dia nifanindry tamin'ireo sehatra rehetra niara-niasa taminy taloha.
Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nifampiresaka taminay momba ny fomba hampiasanay ny fotodrafitrasa noforoniny ho an'ny fampiasana malalaka kokoa izahay. miaraka Martech ZoneNy fitomboan'ny mpanjifa mitombo ho an'ny mpanjifa 100,000 XNUMX, nandany vola be tamin'ny mpivarotra mailaka izahay ary tsy faly koa. Tsy maintsy nitantana rafitra roa izahay, ny iray ho an'ny atiny fanoratana ary ny iray ho fitantanana mpamandrika sy atiny. Maninona izahay no tsy afaka nitantana azy rehetra fotsiny? WordPress?
Afaka… ary lavitra be ny WordPress tamin'ireny taona ireny. Ny lakilen'ny fanararaotana dia ny fampidirana ireo karazan-dahatsoratra napetraka. Ny karazan-dahatsoratra napetraka dia nahafahanay nanao karazana antsoina mailaka ary ampiasao ny rafitra fitantanana anatiny sy templating misy anao hananganana ilay mailaka. Noraisin'i Adama ireo fotodrafitrasa izay namboarina ho azo ahodin-tanana, ary nanomboka niasa tamin'ny plugin izahay! Noho izany, ny mpampiasa dia afaka nampiasa ny plugin hamoronana sy hitantanana ny atiny, ary CircuPress dia afaka nitantana ny fandefasana, ny fanaraha-maso, ny fitantanana bouncing, ny fitantanana ny famandrihana ary ny asa hafa.
Koa satria samy nanana asa antoandro izahay, dia nandray izany ny plugin. Adama no niasa tamin'io, niasa tamin'io aho, nanoratra azy indray i Stephen, ary nisedra sy nanandramana ary nandramana hatrany hatrany izahay. Natolotra ny WordPress tamin'ny herinandro lasa teo ny plugin ary nanome torohevitra tsara izy ireo. Ny herinandro lasa teo dia nanoratra ampahany lehibe tamin'ny famolavolana endrika i Adama ary natolotra indray ny zoma. Tsy ela akory dia nahazo ny vaovao tadiavinay izahay… nankatoavina ny WordPress CircuPress. Mino izahay fa izahay irery no mpanome tolotra mailaka namboarina manokana ho an'ny WordPress!
Nanampy endri-javatra tsy manam-paharoa izahay. Ny plugin dia nampiditra widgets, fantsona fohy ary fampiasa amin'ny endrika famandrihana. Ny plugin dia mamoaka ho azy ny mailakao amin'ny tranokalanao - noho izany dia eo amin'ny tranokalanao ihany ny fomba fijerinao an-tserasera! Ny mailaka isan'andro sy isan-kerinandro dia mandeha ho azy ary mandeha isaky ny manana atiny vaovao ianao. Endri-javatra tena milay dia ny horonan-tsary natsofoka soloina pikantsary sy bokotra filalaovana ka ny antsasaky ny mpanjifa mailaka izay tsy milalao sary dia mamela ny mpamaky tsindry ilay horonan-tsary hilalao azy. Misy endri-javatra bebe kokoa ho avy eo!
Reraka mikorontana amin'ny mpivarotra mailaka lafo vidy ary te-hampiasa ny atiny marina? Midira ho CircuPress anio! Izahay dia efa manova ny mpamandrika ato amin'ity bilaogy ity amin'ny CircuPress… aza hadino ny misoratra anarana dia ho hitanao ny endrik'izy ireo tsara.
Jereo ny fampielezan-kevitra amin'ny mailakao
Mandefasa mailaka amin'ny fangatahana
Amboary ny kaontinao sy ny fandefasana vola
Amboary ny maodelinao
Amboary ny kaody modelyo
Topazo maso ny maodelinao
Tags: mailaka ho an'ny WordPressmailaka marketing wordpressnewsletter ho an'ny WordPressmailaka wordpressplugin mailaka wordpressnewsletter newsletterplugin plugin an'ny WordPressplugin mpamandrika wordpress
Torolàlana ho an'ny Jargon Design Design
Postano dia mivoatra ny foibe fanatanjahantena media sosialy
14 Nov 2013 amin'ny 10:43 maraina
Hey Douglas, vaovao tsara! Misaotra, tena toa endri-javatra mahatalanjona ity ary azoko antoka fa hisoratra anarana ary hijery.
Dec 22, 2013 ao amin'ny 7: PM PM
Arahabaina. Tena maka fanahy be ilay izy… Fa inona no hitranga amin'ny tena tobin'ny AWeber-ko? Azoko afindra amin'ny sehatra misy anao ve izany?
Fa momba izay ihany. EO amin'ny pejy voalohan'ny CircuPress misy bosotra misy soratra mitondra ny lohateny hoe "CircuPress Nomena anarana hoe Plugin WordPress Orinasa Tokony Hananana Ho An'ny mailaka!" ary ao no milaza fa "WordPress dia notononina tao amin'ny top 6 amin'ny plugins WordPress tsy maintsy misy". Mino aho fa te hiteny ianao hoe "nomena anarana i CircuPress…"
Mirary soa amin'ny tetikasanao!
Dec 22, 2013 ao amin'ny 8: PM PM
Misaotra @guillermoziegler: disqus! Miankina amin'ny fomba fampiasana AWeber. Raha mampiasa AWeber fotsiny ianao handefasana ny mailakao isan'andro na isan-kerinandro, dia eny - azonao atao ny manafatra ny mpamandrika (5,000 isaky ny mailaka). Ary misaotra tamin'ny fanitsiana - Nanavao ny tranokala aho!
Dec 23, 2013 ao amin'ny 12: PM PM
Ary fanontaniana iray hafa… Azoko atao ve ny manavao / mampihena ny drafitra arak'izay ilaina?
Izahay dia eo am-pamolavolana ny faktiora ankehitriny - eny, tena marina tokoa!